Vamwe vedu vatengi vanosundira kumashure patinotaura yemunharaunda yekutsvaga optimization. Sezvo ivo vachizivikanwa sekambani yenyika kana yepasi rese, ivo vanotenda kuti kwemunharaunda kutsvaga kwekushandisa kuchakuvadza bhizinesi ravo pane kubatsira. Iyo haisi iyo nyaya zvachose. Muchokwadi, basa redu rakagadzira mhedzisiro inopesana. Kukunda mhedzisiro yekutsvaga kunogona kusimudzira mikana yako yekuverengerwa munyika kana pasirese.
Icho chokwadi ndechekuti kuhwina kwekutsvaga kwekumusha kwakavaka chiremera chedu chedome uye kwakatungamira kwatiri kukura mune zvisiri-nzvimbo yekutsvaga mazwi. Tiri munzira yekukunda mibairo yakawanda yekutsvaga kweSEO inoenderana, yemagariro yakabatana uye neyesangano zvine chekuita nemakwikwi ... yedu yemuno optimization haina kutikuvadza kamwechete.